တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ပတ်တရားမွို့ရှိ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော Royal Thai Navy SEALS ဌာနခြုပျ၊ Royal Thai Navy Fleet ဌာနခြုပျနှငျ့ Royal Thai Marine Corps ဌာနခြုပျတို့အား သှားရောကျကွညျ့ရှုလလေ့ာ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဇှနျ ၂၆၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်တို့ လိုက်ပါပြီး ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ပတ္တရားမြို့ရှိ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်များနှင့် မရိန်းတပ်ဌာနချုပ်တို့အား သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် Royal Thai Navy SEALS ဌာနချုပ်သို့ ရောက်ရှိရာဌာနချုပ်မှူး Rear Admiral Apakorn Youkongkaew နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က King Taksin ရုပ်တုအား ပန်းခွေချအလေးပြုပြီးဌာနချုပ်ရုံး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ယင်းနောက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Royal Thai Navy SEALS တပ်ဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေများအား Powerpoint ၊ Video presentation များဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စစ်သည်များအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုနှင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုအခြေအနေများအားမေးမြန်းဆွေးနွေးရာ ဌာနချုပ်မှူးကပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားသည်။
ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် Royal Thai Navy SEALS ဌာန ချုပ်မှူးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် Navy SEALS တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသုံးပြုသည့်လက်နက်များ၊ ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့် စစ်ရေယာဉ်များအား ကြည့်ရှုကြသည်။၎င်းင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် စစ်ရေယာဉ်ဖြင့် ပင်လယ်အ တွင်းလိုက်ပါစီးနင်းကြပြီး Royal Thai Navy SEALS တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စစ်ရေယာဉ်များသရုပ်ပြမောင်းနှင် မှုကိုကြည့်ရှုကြပြီး စစ်ရေယာဉ်ပေါ်တွင် အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် Royal Thai Navy Fleet ဌာနချုပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ ကမ်းခြေစောင့်ရေယာဉ်စုဌာနချုပ်မှူး Rear Admiral Anucha Iamsuro ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြပြီး ဌာနချုပ်မှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး တို့က ကမ်းခြေစောင့်ရေယာဉ်စုဌာနချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန် များအား Powerpoint၊ Video presentation များဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် က သိရှိလိုသည်များအားမေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ သည် ကမ်းခြေစောင့်ကင်းထောက်ရေယာဉ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ဆက်လက်ပြီးတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းဘုရင့် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် (Royal Thai Marine Corps ) သို့ရောက်ရှိရာဌာနချုပ်မှူး Vice Admiral Sangkorn Pongsiri ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။ ထို့နောက်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းဘုရင့်ရေတပ်ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အားစစ်ဆေးသည်။ ၎င်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် Royal Thai Marine Corps Monument တွင်ပန်းခွေချအလေးပြုသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်မှူးတို့သည် ထိုင်းဘုရင့်မရိန်း တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ဧည့်ခန်းမတွင်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံရေတပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုး မြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှူးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက်တပ်တော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ထိုင်းဘုရင့်မရိန်းတပ်ဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေများအား တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက Powerpoint ၊ Video presentation များဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းဘုရင့် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကမ်းတက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်သရုပ်ပြသခြင်းနှင့် မိုင်းရှာခွေး များနှင့် မိုင်းရှာခြင်းသရုပ်ပြသမှုများအား ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သရုပ်ပြသခဲ့ကြသည့်ထိုင်းဘုရင့် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အား ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်သည်။
၎င်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းဘုရင့် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ပြတိုက်အတွင်းပြ သထားသည့် ထိုင်းဘုရင့်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာမှုသမိုင်း၊ အသုံးပြုခဲ့သည့် ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့် လက်နက်ပစ္စည်းများအား ပြခန်းများအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကရှင်းလင်း တင်ပြသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်မရိန်းတပ်ဖွဲကဌာနချုပ်မှူးတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျထိုငျးနိုငျငံ၊ ပတ်တရားမွို့ရှိ ထိုငျးဘုရငျ့တပျ မတျော Royal Thai Navy SEALS ဌာနခြုပျ၊ Royal Thai Navy Fleet ဌာနခြုပျနှငျ့ Royal Thai Marine Corps ဌာနခြုပျတို့အားသှားရောကျ ကွညျ့ရှုလလေ့ာ
နပွေညျတျော၊ ဇှနျ – ၂၆
ထိုငျးဘုရငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျGen. Tarnchaiyan Srisuwan ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ ထိုငျးနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး (ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မြိုးဇျောသိနျး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာမွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျောတို့ လိုကျပါပွီး ယနနေံ့နကျ ပိုငျးတှငျ ပတ်တရားမွို့ရှိ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောရတေပျစခနျး ဌာနခြုပျမြားနှငျ့ မရိနျးတပျဌာနခြုပျတို့အား သှား ရောကျကွညျ့ရှုလလေ့ာသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ Royal Thai Navy SEALS ဌာနခြုပျသို့ ရောကျ ရှိရာ ဌာနခြုပျမှူးRear Admiral Apakorn Youkongkaew နှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားက ကွိုဆိုနှုတျဆကျ ကွသညျ။ ထို့နောကျတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက King Taksin ရုပျတုအား ပနျးခှခေအြလေးပွုပွီး ဌာနခြုပျရုံး ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျလကျမှတျရေးထိုးသညျ။
ယငျးနောကျ တာဝနျရှိသူတဈဦးက Royal Thai Navy SEALS တပျဖှဲ့၏ လုပျငနျး တာဝနျမြားနှငျ့တာဝနျ ထမျးဆောငျမှုအခွအေနမြေားအား Powerpoint ၊ Video presentation မြားဖွငျ့ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။ ရှငျးလငျးတငျပွမှုမြားအပျေါတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက စဈသညျမြားအားလကေ့ငျြ့သငျကွားပေးမှုနှငျ့ သငျတနျးမြား ဖှငျ့လှဈထားရှိမှုအခွအေနမြေားအားမေးမွနျးဆှေးနှေးရာ ဌာနခြုပျမှူးကပွနျလညျ ရှငျးလငျး ဖွေ ကွားသညျ။
ထို့နောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ Royal Thai Navy SEALS ဌာန ခြုပျမှူးတို့သညျ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ Navy SEALS တပျဖှဲ့ဝငျမြား အသုံးပွုသညျ့လကျနကျမြား၊ ခပျြဝတျတနျဆာမြားနှငျ့ စဈရယောဉျမြားအား ကွညျ့ ရှုကွသညျ။၎င်းငျးငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ စဈရယောဉျဖွငျ့ ပငျလယျအ တှငျးလိုကျပါစီးနငျးကွပွီး Royal Thai Navy SEALS တပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ စဈရေ ယာဉျမြားသရုပျပွမောငျးနှငျ မှုကိုကွညျ့ရှုကွပွီး စဈရယောဉျပျေါတှငျ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကူးကွသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ Royal Thai Navy Fleet ဌာနခြုပျသို့ ရောကျရှိကွရာ ကမျးခွစေောငျ့ရယောဉျစုဌာနခြုပျမှူး Rear Admiral Anucha Iamsuro ကကွိုဆိုနှုတျဆကျ ကွပွီး ဌာနခြုပျမှူးနှငျ့တာဝနျရှိသူတဈဦး တို့က ကမျးခွစေောငျ့ရယောဉျစုဌာနခြုပျ ဖှဲ့စညျးပုံနှငျ့လုပျငနျးတာဝနျ မြားအား Powerpoint၊ Video presentation မြားဖွငျ့ရှငျးလငျးတငျပွကွရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ က သိရှိလိုသညျမြားအားမေးမွနျးဆှေးနှေးသညျ။ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား သညျ ကမျးခွစေောငျ့ကငျးထောကျရယောဉျပျေါသို့ တကျရောကျကွညျ့ရှု လလေ့ာကွရာ တာဝနျရှိသူမြားက ရှငျးလငျးတငျပွကွသညျ။
ဆကျလကျပွီးတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးဘုရငျ့ မရိနျးတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ (Royal Thai Marine Corps ) သို့ရောကျရှိရာဌာနခြုပျမှူး Vice Admiral Sangkorn Pongsiri ကကွိုဆိုနှုတျဆကျသညျ။ ထို့နောကျတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ထိုငျးဘုရငျ့ရတေပျဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏အလေးပွုခွငျးကိုခံယူပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့အားစဈဆေးသညျ။ ၎င်းငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ Royal Thai Marine Corps Monument တှငျပနျးခှခေအြလေးပွုသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ထိုငျးဘုရငျ့မရိနျးတပျဖှဲ့ ဌာနခြုပျမှူးတို့သညျ ထိုငျးဘုရငျ့မရိနျး တပျဖှဲ့ဌာနခြုပျဧညျ့ခနျးမတှငျတှဆေုံ့၍ နှဈနိုငျငံရတေပျပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုး မွှငျ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား အားရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးကွသညျ။ တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ထိုငျးဘုရငျ့မရိနျးတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျမှူးတို့သညျ အမှတျတရ လကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျကွသညျ။ ထို့နောကျတပျတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားအား ထိုငျးဘုရငျ့မရိနျးတပျဖှဲ့၏လုပျငနျးတာဝနျမြားနှငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျမှုအခွအေနမြေားအား တာဝနျရှိသူတဈဦးက Powerpoint ၊ Video presentation မြားဖွငျ့ရှငျးလငျးတငျပွကွရာ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျက သိရှိလိုသညျမြားအား မေးမွနျးဆှေးနှေးသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးဘုရငျ့ မရိနျးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ကမျးတကျစီးနငျးတိုကျခိုကျမှုစှမျးရညျသရုပျပွသခွငျးနှငျ့ မိုငျးရှာခှေး မြားနှငျ့ မိုငျးရှာခွငျးသရုပျပွသမှုမြားအား ကွညျ့ရှုအားပေးကွသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက သရုပျပွသခဲ့ကွသညျ့ထိုငျးဘုရငျ့ မရိနျးတပျဖှဲ့ဝငျမြား အား ခြီးမွှငျ့ငှမြေားပေးအပျသညျ။
၎င်းငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးဘုရငျ့ မရိနျးတပျဖှဲ့ပွတိုကျအတှငျးပွ သထားသညျ့ ထိုငျးဘုရငျ့မရိနျးတပျဖှဲ့ပျေါပေါကျလာမှုသမိုငျး၊ အသုံးပွုခဲ့သညျ့ ခပျြဝတျတနျဆာမြားနှငျ့ လကျနကျပစ်စညျးမြားအား ပွခနျးမြားအတှငျး လှညျ့လညျကွညျ့ရှုလလေ့ာကွရာ တာဝနျရှိသူတဈဦးကရှငျးလငျး တငျပွသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ထိုငျးဘုရငျ့မရိနျးတပျဖှဲကဌာနခြုပျမှူးတို့သညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူအမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။